Wasiirka Arrimaha Dibadda oo deg deg Muqdisho u yimid, kaddib markuu 9: bil dibada ku soo shaqeeyay!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Wasiirka Arrimaha Dibadda oo deg deg Muqdisho u yimid, kaddib markuu 9: bil dibada ku soo shaqeeyay!!
Wasiirka Arrimaha Dibadda oo deg deg Muqdisho u yimid, kaddib markuu 9: bil dibada ku soo shaqeeyay!!
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya, C/salaan Hadliye Cumar ayaa deg deg u soo galay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, maalmo kaddib markii la doortay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Wasiir Hadliye ayaa 9-kii bilood ee u dambeysay ku shaqeynayay magaalada Nairobi, iyadoo intii aan ololaha doorashada socon, imaan Muqdisho, inta badan shirarka uu ka qeyb galayay oo uu Soomaaliya ku matalayay waxaa uu ka aadayay magaalada Nairobi.
Imaanshihiisa Muqdisho ayaa ku soo beegantay, xilli la qaban qaabinayo Xaflada caleema saarka iyo xil wareejinta Madaxweynaha cusub iyo Madaxweynihii hore oo lagu wado inay dhacdo maalmaha soo socda.
Doorka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ku leedahay xaflada caleema saarka ayaa ah mid aad u hooseysa, marka loo eego qaabka Wasaaraddu u shaqeyneysay bilihii u dambeysay, iyadoo Xoghayihii joogtada Wasaaradaasi oo waajibaadkii iyo shaqooyinkii uu lahaa la wareegay Wasiir kuxigeenka oo u shaqeeya hab Xoghaye iyo Agaasime, halka Wasiirkii Wasaaraddaasi uu saldhigtay Magaalada Nairobi, muddo ku dhowaad 9 bilood aan ka howlgalin Xafiiskiisa ku dhex yaala dhismaha qurxoon ee Wasaaraddaasi.
Howsha caleema saarka iyo xil wareejinta ayaa waxaa sii wada Safiirka Soomaaliya u fadhiya Kenya Amb. Jamaal Maxamed Xasan, kaasoo haatan ka mid noqday howl wadeenada Madaxweynaha cusub.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa howsheeda tahay hab maamuuska iyo diyaarinta xaflada caleema saarka, martiqaadna u dirto Madaxda caalamka, si ay uga soo qeyb galaan Xaflada caleema saarka.
Shaqaalaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo diblomaasiyiinta Wasaaradda ka tirsan ayaa sheegaya in Wasiir Hadliye uu dayacay howshiisa, isla markaana howlihii Wasaaradda ka dhigay mid isaga u gaar ah oo boorsadiisa ku jirta.
Previous PostMUUQAAL: Banaanbiixii ugu waynaa oo Shacabka Buulo-burde iyo Ciidanku Ku taageeraan Madaxwayne Farmaajo! Next PostSafiirka dowladda UK u soo magacawday Soomaaliya oo sifo sharci daro ku howl galay sameeyayna wax loo diiday!!